BisheshPati | Trusted Online News Protal in Nepal प्रधानमन्त्री कप- यी हुन् ब्याटिङमा चम्केका शीर्ष ५ खेलाडी - BisheshPati
काठमाडौं । बुधबार सम्पन्न ट्वान्टी-२० फर्म्याटको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएर सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ०ले उपाधि जित्यो । अनुमान गरिए झैं वागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनलसम्म पुगेका थिए ।
आगामी महिना हुने ट्वान्टी-२० विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरका लागि बोलाइएका ३० खेलाडीबाट छाँट्न प्रधानमन्त्री कपकै प्रदर्शनलाई आधार बनाइने प्रमुख प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले बताएका थिए । अब प्रारम्भिक टोलीबाट खेलाडीहरु छाँटिदै जानेछन् । यो प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरेका केहि खेलाडी समेटिन पनि सक्छन् । राष्ट्रिय टिमका पूर्व उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीका लागि यो प्रतियोगिता विशेष रह्यो । उनले आफूलाई ब्याटिङसँगै बलिङमा पनि अब्बल सावित गरे । प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने र सर्वाधिक विकेट लिने ५ खेलाडीको सूचीमा दुवैतर्फ उनी परेका छन् ।
सबैभन्दा बढी रन बनाउने पाँच ब्याट्स म्यान
१. आसिफ शेखः एपीएफ क्लबका प्रारम्भिक ब्याटर आसिफ शेख प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । राष्ट्रिय टोलीका सदस्यसमेत रहेका आसिफले प्रतियोगितामा २ अर्धसतकसहित कुल २ सय २७ रन बनाएका हुन्।
२. प्रदिप ऐरीः एपीएफ क्लबकै अर्का ओपनर प्रदिप ऐरी पनि प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्दै दोस्रो धेरै रन बनाउने ब्याटर बने। उनले २ अर्धसतकसहित २ सय १३ रन जोडे। ऐरी राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमनको दौडमा छन्।
३.कुशल भुर्तेलः नेपाल पुलिस क्लबका ओपनर कुशलले प्रधानमन्त्री कपमा चार खेल मात्र खेलेका थिए । उनले समुहगत चरण बाहेक सेमिफाइनल र फाइनलमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कारण खेल्न पाएनन् । त्यहि पनि प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट ब्याटर बन्न सफल भए । कुशल प्रतियोगितामा सर्वाधिक तेस्रो धेरै रन बनाउने ब्याटर बने । कुशलले समूह चरणमा कर्णाली प्रदेशविरुद्ध ८२ रन जोडेका थिए ।
४.देव खनालः यू–१९ राष्ट्रिय टोलीका कप्तान देव खनालले लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री कप खेलेका थिए । उनले प्रतियोगितामा दुई अर्धसतकसहित एक सय ५८ रन जोेडेका थिए। चार खेल मात्र खेलेका देव सबैभन्दा धेरै रन बनाउने ब्याटरको सूचीमा चौथो स्थानमा रहे। देवले गण्डकी प्रदेशविरुद्ध सर्वाधिक ५६ रनको योगदान गरेका थिए ।
५. दीपेन्द्र सिंह ऐरीः नेपाल पुलिस क्लबका दिपेन्द्रले प्रतियोगितामा १ सय ५८ रन बनाउँदै सर्वाधिक धेरै रन बनाउने ब्याटरमा पाँचौं स्थानमा रहे। उनले प्रतियोगितामा दुई अर्धसतक, १५ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे। फाइनलमा एपीएफविरुद्ध सबै भन्दा धेरै ६५ रन जोेडे पनि उनले टोलीको हार टार्न सकेनन्। रासस